Kedu ihe blizzard na kedu ka ọ si eme | Netwọk Mgbasa Ozi
A blizzard bụ snow, ice, ma ọ bụ oké mmiri ozuzo na-agbasi ike n’ike n’ike n’ugwu. Ha dị oke egwu ma n'akụkọ ihe mere eme ha ebutewo ọtụtụ ọdachi na ụfọdụ nnukwu obodo. Ha egbuola ọtụtụ ndị ugwu na ndị ugwu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata njirimara blizzards na etu ha si akpụ, na-agụ agụ 🙂
1 Atụmatụ nke blizzard
2 Kedu ihe na-akpata oke mmiri?
3 Mmetụta dị egwu
4 Oke mmiriigwe na ugwu
4.2 Loss nke visibiliti
4.3 Ahaghị nhata
4.4 Ọgba aghara
4.5 Ebum n'uche
4.6 Ọbara hypothermia
Atụmatụ nke blizzard
A maara blizzards dị ka snow, snow, ma ọ bụ ifufe na-acha ọcha. Mgbe oke mmiri ozuzo mere, okpomoku na-adịkarị ala karịa ogo 0. Otu n’ime njirimara ha bụ isi ma na - eme ka ha dịkwuo egwu bụ ikuku ha siri ike. Maka ndị ugwu, ha nwere ike ibute ihe egwu ọnwụ, ebe ọ bụ na ha na-eme ka ọhụhụ siri ike na ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata ala.
N'ime egbe mmiri, n'ihi ikuku siri ike, ịnwere ike ịnwe ihe ọkụ ọkụ ruo -20 ogo. Ifufe nwere ike ịkwagide ma gusty ma abata na ọsọ nke 56 km / h ma ọ bụ karịa. N'ozuzu, blizzards na-ewe ihe dị ka awa 3 na ọhụụ na-ebelata ihe na-erughị ọkara kilomita.
Kedu ihe na-akpata oke mmiri?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla snow snow nwere ike iji blizzard emetụta. Ọ bụ ihe nkịtị na ọ na-eme na mpaghara polar, mpaghara dị ya nso ma ọ bụ ugwu dị elu. Taa, mpaghara ebe a na-edebanyekarị blizzards na-abụkarị, dịka ọmụmaatụ, na United States na ugwu Arizona. N'ebe ndị a, e nwere usoro nrụgide dị ala na-aga n'ebe ndịda ma ọ bụrụ na usoro nrụgide dị elu gafee Great Basin, oke ikuku ga-eme.
Blizzards na-etokarị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke nnukwu usoro oké ifufe. Nnukwu ọdịiche dị n'etiti nrụgide dị elu na nke dị ala bụ ihe na-eme ka ikuku dị ike. Anyị na-echeta na a na-eme ikuku site na nsogbu dị iche n'etiti otu isi na ọzọ. Ihe dị iche na nrụgide nke ikuku ahụ, ikuku ndị ahụ ga-adịwanye ike.
N'aka nke ọzọ, mmiri nke friza na mbara igwe na-anọgide na-akpụ kristal na-eso ndị ọzọ. Ka kristal ice na-adị n'otu, ha na-etolite snowflakes ruo isi isii. Ọzọkwa, mgbe snow dara na ifufe dị ike, a na-ebipụ visibilụ na ọkara.
Na nkenke, ị nwere ike ịsị na blizzard bụ nchikota ọjọọ nke snow na ifufe.
O doro anya, blizzards dị ize ndụ dabere na ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ, a ga-echebe gị. Mana ọ bụrụ na ọ ju gị anya na ị nọ mba ọzọ ọ ga-adị egwu. Ọ bụrụ na ịnweghị nchebe na gị, ikuku ikuku nwere ike ibuga hypothermia yabụ ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị banye n'ime ụgbọala, mgbasa ga-aghọ ihe agaghị ekwe omume. Ọhụhụ abụrụla kilomita 0,40 oké ifufe na-efegharịkwa ụgbọ ala ahụ. Nke a nwere ike ime ka onye na-anya ya gbagwojuo ya anya ma nwee ihe ọghọm.
Mgbe blizzards ahụ dị oke ike, ha nwere ike imebi ọdịda na sekit eletriki ma kpatara oke oji. Nke a na-eme n'ihi na oke ikuku na oke mmiri na-emebi wiring.
Oke mmiriigwe na ugwu
Anyị ga-arara ngalaba zuru oke iji kọwaa ọnọdụ oke ikuku dị na ugwu ahụ. Dị ka e kwuru na mbụ, ọtụtụ ndị ugwu, ndị na-arị ugwu, na ndị na-arị ugwu arịgoro na ha. Mgbe okpomọkụ ha na-agbanye n'okpuru -15 ogo na ọhụụ na-ebelata, onodu di oke egwu.
Mgbe ị nọ n'ugwu ndị dị elu, ikuku na-akụda ahụ gị na ihe mgbochi ọ bụla n'adịghị ka obodo. Buru n’uche na n’obodo, anyị nwere ụlọ ndị na-emebi ikuku. Na mgbakwunye, n'ugwu ahụ enwere ọtụtụ ihe anaghị agbakwunye n'ala ma nwee ike iti anyị. Dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ ice na-etolite, obere alaka na okwute ndị ikuku na-akwali.
Mgbe onye na-arị ugwu na-arị ugwu ma jiri ịnyịnya mmiri na-eju ya anya, enwere mmetụta ụfọdụ na-egbochi njem ahụ.
Ihe mbụ ị chere mgbe ị na-arị ugwu na oke mmiri na-eju anyị anya bụ euphoria. Anyị nwere ike ịnwe mkpali ịkwaga n'agbanyeghị nsogbu ndị nke a na-apụta. Nke a nwere ike ime ka anyị ghara ịhụ nke ọma ịdị ize ndụ nke ọnọdụ ahụ.
Loss nke visibiliti
Ọ bụrụ na n’oge anyị na-arị ugwu ahụ, anyị anaghị eyiri ugogbe na-enweghị nchekwa, ihe ndị a kpọtụrụ aha n’elu nwere ike ịmasị anyị. Ọ bụrụ na ọ kụrụ anyị na anya, ọ nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu.
N’ugwu, e nwere ebe ndị pere mpe ebe nguzozi na-arụ ọrụ dị mkpa. Oké ifufe nke ifufe na-efe na blizzard nwere ike ime ka anyị ghara ile anya ma daa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ na-emetụta ihu na anya anyị oge niile, ọ na-eme ka anyị nwekwuo ndidi ma ghara ịtụkwasị uche. Nke a nwere ike iduga anyị ihie ụzọ. A na-atụ aro ka ị ghara ịlaghachi azụ na ikuku ka akpaazụ ghara imeri anyị n'ihi ibu ya.
Site na anụ ụtọ anyị nwere na mbido na enweghị ọhụụ, anyị na-ewulite ntụkwasị obi. Nke a bụ n'ihi na anyị nwere nsogbu n'ihu anyị n'ihu. Agbanyeghị, enweghị ezigbo visibiliti, anyị tufuru ebe nrụtụ aka akọwapụtara. Nwere ike ikwenye na ị na-aga n'ụzọ ziri ezi ma bụrụ ihe na-ezighi ezi. Nbelata visibiliti na-eme ka anyị ghara nweta ntụnye na, n'ikpeazụ, ịdaba na ogbo nke demoralization.
Ọ bụrụ na anyị zuru oke na ikuku, ọ ga-abụrịrị na omume anyị ga-eme n'oge ahụ ka anyị pụọ na ya. O kwere omume na oge nwere ike ighogbu anyi. Anyị nwere ike iche na ọtụtụ nkeji nwere ike ịghọ ọtụtụ awa. Na ọnọdụ a, ị ga-enwe mkpebi siri ike.
Na obere okpomọkụ na ikuku ifufe, hypothermia na-egosi na obere oge. Uwe ndị ahụ yiri ka ha anaghị ekpo ọkụ, ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ puku akwa. Ọ bụrụ na oyi na-atụ anyị, ahụ anyị ga-ebelata ọnọdụ okpomọkụ ya ruo ọkwa dị egwu. Ọ bụrụ na akụrụngwa adịghị mma ma ọ bụ na ọsụsọ na-ede gị, ọnwụ ọkụ ga-adị ngwa ngwa.
Tupu oke mmiri ozuzo n’elu ugwu, mkpebi kacha mma ga-agbada. N'agbanyeghị ebe ị gbadara, ọ bụrụhaala na ịdị elu ya na-ebelata, ihe ize ndụ na-ebelata.
Site na ozi a ị ga-adị njikere karị ịnwe oke ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe blizzard na kedu ka ọ si eme